पीडी भोटियाको समाज सेवा कि राजनीति? : भने-जसवन्त सिंह र एसएस अहलुवालियाले केही गरेनन् - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारपीडी भोटियाको समाज सेवा कि राजनीति? : भने-जसवन्त सिंह र एसएस अहलुवालियाले केही गरेनन्
लोकसभा चुनाउलाई पहाडका सानासाना समस्या समाधान गर्ने चुनाउकोरूपमा कसैले लिँदैनन्। समस्या समाधान गर्नलाई त जिटीए छँदैछ। समस्याको सामाधान गर्नैको लागि जिटीएमा करोडौं रुपियाँ आउने गर्छ। तर संसद त छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको निम्ति उपयोगमा आउने संस्थान हो। लोकसभा चुनाउमा सांसद यसै कारण पठाइन्छ कि उनले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको कुरा उठान् गरुन्। भाजपाका सांसदहरूले संसदमा कुरा उठाएनन्। यसकारण भूमिपुत्र उम्मेदवार यसपल्ट पठाइनुपर्ने चर्चा छ। तर भोटिया त्यो दलबाट संसदमा जान खोजिरहेका छन्, जुन दल गोर्खाल्याण्डको कट्टर दुश्मन हो। त्यसो भए के त भोटियाको संसद बन्ने सपना साकार होला त?
विश्लेषण, सिलगढी, 26 नोभेम्बर
केही समयदेखि चिकित्सककोरूपमा ख्याति कमाएका डा. पीडी भोटिया अहिले चर्चामा छन्। उनको चर्चा दुइ किसिमको छ। एक, यसपालिको लोकसभा चुनाउमा तृणमूल काङ्ग्रेस प्रार्थीकोरूपमा र अर्को उनको तीब्र भइरहेको समाज सेवा।
मिडियामा घाइँघुइँ छ, पीडी भोटिया ममता व्यानर्जीकै गोटी हुन्। व्यानर्जी ठान्छिन्, कुनै चर्चित हस्तीलाई चुनाउमा उठाइयो भने जनताको मन जित्न सकिन्छ। तर फुटबल जगतमा नाम कमाएका भाइचुङ भोटियालाई पहाडका जनताले पत्तो दिएनन्। यसमा प्रमुख कारण हो, तृणमूल काङ्ग्रेस। भाइचुइ भोटियालाई पहाडमात्र होइन भारतभरिका नागरिकले माया गर्छन्। पहाडको सवालमा, उनी जति नै ठूलो हस्ती किन नहुन् तर आए सत्ताको गोटी बनेर। जुन सत्ताले जताको सपना गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन पटकपटक मिचेको छ।
सत्ताको महत्वाकांक्षा पूरा गर्न र आफ्नै महत्वाकांक्षा पनि पूरा गर्न आए भाइचुङ। पहाडका जनतालाई थाहा छ, तृणमूल काङ्ग्रेस जति नै राम्रो दल किन नहुन्, तर त्यो दल हो त गोर्खाल्याण्ड विरोधी। तृणमूलको नाइके ममता व्यानर्जीले दुइवटा कुरा गरेकी छन्। उनी गोर्खाल्याण्ड केन्द्रको विषय हो भन्छिन्। तर केन्द्रले कुनै पहल चाल्न खोजे ‘ज्यान दिन्छु तर छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड हुन दिन्न, विभाजन हुन दिन्न’ भन्छिन्।
केन्द्रको विषय हो भने किन ‘ज्यान दिन्छु गोर्खाल्याण्ड हुन दिन्न’ भन्छिन् त ममता व्यानर्जी? यहीँबाट तृणमूल काङ्ग्रेस वा राज्य सरकारको नियत पहाडबारे के छ? छर्लङ्ग हुन्छ। जनतालाई यही कुरा चाँही मुटुमा बिझेको छ। पक्कै पनि राज्य सरकारको अत्याचार, गोलीचलाएर गरेको हत्या र पुलिसी दमनको रिस् यसपालि पहाडवासीले व्यालेटबाट दिँदैन भन्न सकिन्न।
सबैले शङ्का गरिरहेकै छन्, यसपल्ट पहाडमा चुनाउ स्वतन्त्र हुने छैन। कहीँ बुथ क्याप्चर हुनै सक्छ। पुलिसी दमन बढ्नै सक्छ। तर जस्तै जे गरे पनि व्यालेटभित्र आफ्नो मत खसाल्न रोक्न सक्ने छैनन्।
यसपल्टको आन्दोलनमा विनय तामाङहरूलाई ‘पक्राउको डर’- देखाएरै आन्दोलन दबाउनमा ममता व्यानर्जी सफल बनिन्। विनय तामाङहरूलाई अफ्ठ्यारो नपरोस् भनेर ‘गोर्खाल्याण्ड जसले माग्दा पनि हुन्छ, त्यो केन्द्रको विषय हो’ भनेर बाटो बनाइदिइन्। विनय तामाङहरूले ममता व्यानर्जीको यो मन्त्र अहिले पनि उच्चारण गर्छन्।
तर केन्द्रले गोर्खाल्याणडबारे बोलाएको त्रिपक्षीय बैठकमा जाँदैनन्। गोर्खाल्याण्डको चर्चैसमेत गर्दैनन्। बरु सिलगडीका व्यापारीहरूलाई भन्छिन्, ‘पहाड अशान्त भयो भने व्यापार चौपट हुन्छ, पहाडमा भाजपा र विमलले अशान्ति गर्दैछन्, त्यसको विरोध गर्नु।’ भन्छिन्, ‘विकास भन दिन्छु, गोर्खाल्याण्ड नभन। बङ्गाल विभाजन हुन दिन्न।’
गोर्खाल्याण्डको कट्टर दुश्मन पार्टी तृणमूल काङ्ग्रेसबाट भोट माग्ने भाइचुङ जिल्ल परेको कारण नै त्यही हो। पहाडका मानिसहरू बरु पुलिसको गोली थाप्छन्, तर गोर्खाल्याण्ड विरोधीहरूलाई भोट दिँदैनन्। किन भने पहाडलाई, गोर्खालाई जिउँदो राखेको छ भने त्यही एउटा मुद्दाले राखेको छ। त्यही मुद्दा नष्ट गर्ने चाहे विनय तामाङ हुन् वा ममता व्यानर्जी नै किन नहोस्, उनीहरूलाई पहाडका मानिसहरूले गाली नै गर्छन्।
विनय तामाङ र ममता व्यानर्जी मात्र किन आन्दोलनकालमा मौन बस्ने भाजपा र सांसदहरूलाई, आन्दोलन अलपत्र पारेर भूमिगत हुने विमल गुरुङहरूलाई पनि पहाडबासीले त्यसै छोडेका छैनन्। बाहिर खुल्ला आलोचना गर्न नपाए पनि पाडबासीको रोष सोसल मिडियामा लछेप्रै पाइन्छन्। सोसल मिडियामा विनय तामाङहरूले अहिलेसम्म पनि गाली खाइरहेकै छन्। सोसल मिडियामा आउने नकरात्मक टिप्पणी पहाडवासीको मनभित्र दबेर बसेको विरोध कै प्रकटिकरण हो।
यस्तोमा ममता व्यानर्जीको गोटीकोरूपमा पीडी भोटिया आउने सम्भावना छ। तृणमूल काङ्ग्रेस र विनय खेमा मोर्चाले मुखै फोरिहालेको छैन, तर पीडी भोटिया, विनय तामाङ र तृणमूल काङ्ग्रेसबीचको साँठगाँठले डा. भोटिया लोकसभा चुनाउको प्रार्थी बन्न महत्वाकांक्षी रहेको स्पष्ट छ।
यसो त भोटियाले निक्कै खर्च पनि गरिसकेका छन्। भर्खरै विनय तामाङलाई पहाडको विकास गर्नु भनेर तीन लाख रुपियाँ दिएर भोटियाले निक्कै चर्चा कमाए। मानिसहरूले उनलाई हाँसोको पात्रसमेत बनाए। तीन लाख रुपियाँले जिटिएमा के विकास होला? मानिसहरूले हजारौं प्रश्न गरे। वास्तवमा तीनलाख जिटिएको विकासको लागि होइन्, लोकसभा चुनाउमा विनय तामाङहरूको समर्थन माग्ने चाप्लुसी हो भन्ने विशलेषकहरूले सहजै अनुमान लगाइरहेकै छन्। आफ्नो महत्वाकांक्षा पूरा गर्न पैसाको चलखेल गर्ने भोटियाको सांसद बन्ने महत्वाकांक्षा चहकिलो बनेको छ।
अचानक भोटियाको समाजसेवा पनि चरममा छ। विभिन्न ठाउँमा स्वास्थ्य शिविर गरिरहेकै छन्। निशुल्क सेवा दिइरहेकै छन्। सेवा पाउनेहरूबीच घाइँघुइँ छ, ‘डाक्टर सापले अहिले सेवा त दिइरहेका छन्, बदलामा भोट माग्ने त होइनन्?’
शङ्का गर्नै सकिन्छ, भोटियाको समाज सेवा वा निशुल्क स्वास्थ्य सेवा पनि वास्तवमा राजनीति नै हो। अहिले स्वास्थ्य सेवा दिने, सेवालाई आफ्नो महत्वाकांक्षा पूरा गर्ने भऱ्याङ बनाउने र सांसद बन्ने। यसो त यो सपना नराम्रो छैन। तर डा. भोटियाजस्ता समाजसेवी गोर्खाल्याण्ड विरोधी दलको टिकट बोकेर आउँदा जनताले उनलाई भाइचुङ भोटियाकै दुर्गतिमा ल्याउँदैन भन्न सकिन्न।
भाइचुङ पनि मानिस राम्रा थिए, तर आउने माध्यम जनाकांक्षाका विरोधी थियो। भोटिया पनि मानिस राम्रै होलान्, तर उनी जुन दल र नेताहरूलाई अङ्गालो मारेर आइरहेका छन्, के त्यो जनतालाई रुच्ला त?
भोटियाले हिजो संवाद माध्यमलाई भनेका छन्, ‘जसवन्त सिंह र एसएस अहलुवालियाले राम्रो कामै गरेनन्। पहाडमा धेरै समस्या छन्। त्यो सामाधान गर्ने भूमिपुत्र उम्मेदवार नै संसद जानुपर्छ।’
लोकसभा चुनाउलाई पहाडका सानासाना समस्या समाधान गर्ने चुनाउकोरूपमा कसैले लिँदैनन्। समस्या समाधान गर्नलाई त जिटीए छँदैछ। समस्याको सामाधान गर्नैको लागि जिटीएमा करोडौं रुपियाँ आउने गर्छ। तर संसद त छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको निम्ति उपयोगमा आउने इकाई हो। लोकसभा चुनाउमा सांसद यसै कारण पठाइन्छ कि उनले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको कुरा उठान् गरुन्। भाजपाका सांसदहरूले संसदमा कुरा उठाएनन्। यसकारण भूमिपुत्र उम्मेदवार यसपल्ट पठाइनुपर्ने चर्चा छ। तर भोटिया त्यो दलबाट संसदमा जान खोजिरहेका छन्, जुन दल गोर्खाल्याण्डको कट्टर दुश्मन हो। उनले उठाउँला त तृणमूलको सांसद बनेर गोर्खाल्याण्डको आवाज?
त्यसो हो भने किन दिनु उनलाई भोट? त्यसो भए के त भोटियाको सांसद बन्ने सपना साकार होला त?
त्यो त तीनलाख रुपियाँ थापेर जिटीएको विकास गरिरहेका विनय तामाङहरू अनि तृणमूल काङ्ग्रेसको संयुक्त ग्राण्ड डिजाइन सार्वजनिक भएपछि मात्र लख काट्न सकिने कुरा हो।